Maxaad ka taqaanaa Degmada Warshiiq warbixin | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Maxaad ka taqaanaa Degmada Warshiiq warbixin
Maxaad ka taqaanaa Degmada Warshiiq warbixin
Degmada Warshiiq ee Gobolka Shabeelada Dhexe oo qayaas ahaantii 65 KM ujirta magaalada Muqdisho,waa degmo qadiimi ah oo soo jirtay boqolaal sano ka hor,waxay kamid ahayd degmooyinkii laga xoreeeyey Shabaab muddo sanado ah ka hor,tan iyoxiligaasi degmada waxaa jiray baahiyo dhanka adeegyada bulshada ah.
Dhaqaalaha degmada ayaa ku tiirsan dhaqashada xoolaha iyo ka ganacsiga Kalluunka,waxaa sidoo kale soo wehliyo wax soo saarka beeraha balse aan sidaasi u buurnayn.
Degmada Warshiiq iyo tuulooyinka hoostaga ayaa haatan sameynaya horumaro kaladuwan,hase ahaatee waxaa weli muuqata in ay jiraan baahiyo loo qabo adeegyada bulshada sida Caafimaadka, waxbarashada,waxaana jira goobo waxbarasho aan sidaasi u ballaarnayn.
Hadaba iyadoo taasi ay jirto ayaa waxaa soconaya dadaalo ku aadan sidii loo horumarin lahaa bulshada gaar ahaan dhanka waxbarashada,dhawaan waxaa tuulada Qeyloweyne oo hoostagta degmada Warshiiq laga hirgeliyay iskuul Hoose Dhexe kaasi oo loogu talagalay in ay ka faa’idaystaan bulshada deegaankaasi,waxaana hirgelisay Hay’adda Gifty of The Givers oo laga leeyahay dalka Koonfur Africa taasi oo ka shaqeysa daryeelka bulshada.
Guddoomiyaha Degmada Warshiiq ee Gobolka Shabeelada Dhexe Axmed Xuseen Axmed(SHiidka) ayaa uga mahadceliyay hay’adaasi dadaalkeedi ku aadan isgarabtaaba bulshada,isagoo xusay in ay jiraan baahiyo loo adeegyada muhiimka ah oo ay bulshadu u baahanyihiin.